Classified - Internet Journal
အတွဲ(၁၄) အမှတ်(၃) Monday, 14 January 2013 00:00
(CCTV ၁လုံး တပ်ဆင်ခ - ၁၀၀၀၀ ကျပ်)-------------------------------------------------------ပြင်ဦးလွင်ပြင်စာရွာအနီးလွန်တောင်းရှိမြေတစ် ဧက အကွက်ရိုက်ပါက(ပေ ၄၀/၆၀)၁၂ကွက် ကျော်ရ မည်။သိန်း(၈၀) (ညှိနိူင်း) ဖုန်း-၀၉-၉၁၀၁၁၁၄၁-------------------------------------------------------ရောင်းသည်။၀ယ်သည်။ (Not Brand But Excellent Quality) Apple Iphone Samung HTC LG Sony Huawei Nokia Ipad Ipod Iphone Notebook Macbook Pro Macbook Air Laptop Netbook All kind of Tablet & Sony PSP External Harddisk contact to - 376420-------------------------------------------------------မိမိတွင်ပိုနေ၍ ပြန်လည်ရောင်းချလိုသော၊ (သို့) exchange ပြုလုပ်လိုသော FairPrice UsedMarketPlace မှာ၇ပြီ.Laptop Ultrabooks Notebook Netbook Mackbook MacbookPro Macbook Air.Phone handset Apple Samsung HTC Nokia Blackberry Sony LG SKY HUAWEI All kind of Andriod Device and Apple Device Ipad Iphone Ipad Samsung Tablet all kind of Tablet PSP External Hardisk များဈေးကောင်းပေး ၀ယ်လိုသည်။ 09-51-78391,
-------------------------------------------------------htc one x ရောင်းမည်။ black colour. internal 32 gb. 255000. ph; 09 73158048-------------------------------------------------------Use I phone416g black (90%New) ရောင်းရန် ရှိသည်။ ဘူးကာဗာပစည်းအစုံပါသည်။ 330000 ကျပ်။ Galaxy S3 နှင့်လဲမည်။ ဖုန်း 09420753695-------------------------------------------------------အခန်း Share လိုသည်။ (ကွန်ပျူတာ Service ၊ မိတ္တူ၊ စာစီ/စာရိုက်၊ သင့်လျော်) ဖုန်း-၀၉-၅၄၁၁၁၈၅၊ ၀၉-၇၃၀၁၃၉၃၈-------------------------------------------------------Acer Aspire 4741G Core i3 (၁) လုံေးရာင်းမည်။ Intel Core i3 RAM 2GB HDD 500GB, Graphic Nvidia 512 MB, DVD/RW, Bluetooth, Wifi, Card Reader, Display 14" LED, Price: 280000 Ph:09-450039844-------------------------------------------------------Projector Rental Service အလှူ၊ မင်္ဂလာ၊ စာမေးပွဲများ၊ မိမိတို့၏အိမ်၊ ရုံး၊ အခမ်းအနားများတွင် လိုအပ်သော Projector ၊ Speaker နှင့် အသံစနစ်များ ငှားပေးသည်။ ဖုန်း-၀၉-၇၃၁၅၄၆၄၄-------------------------------------------------------ဈေးကောင်းပေးဝယ်လိုသည်။ Samsung S2,S3 Note 1, Note2iPhone 4/4S/5, iPod 4/5 iPad 2/3/4 mini, Asus Laptop, Mac Book Pro, Mac Book Air ဖုန်း-၀၉-၄၅၀၀၃၉၈၄၄-------------------------------------------------------အင်တာနက်ဆိုင်သုံး ငွေရှင်းကောင်တာ အကျယ် ၃ ပေ× အရှည် ၇ပေတစ်လုံးနှင့် လက်တန်းပါ နောက်မှီ Stainless Steel ထိုင်ခုံ ၂ လုံးရောင်းရန် ရှိသည်။ ဖုန်း-၀၁-၅၁၂၈၄၄-------------------------------------------------------အမြန်ရောင်းမည်။ လက်ရှိလုပ်ကိုင်နေသော အင်တာ နက်ဂိမ်းဆိုင် ၁။ ကွန်ပျူတာ ၃၆ လုံး (စားပွဲ ထိုင်ခုံ မပါ)၊ ၂။ အဲယားကွန်း 1.5 HP (၅လုံး)၊ ၃။ မီးစက် 25 KVA (၁လုံး)၊ ၄။ မီးအားမြင့်စက် 20 KVA (၁ လုံး)၊ ၅။ အင်တာနက်လိုင်း ၃ လိုင်း (MPT, YTP, Red Link) ပစ္စည်းစုံဆိုင် အသစ်ဖွင့်နိုင်သည်။ (ညှိနှိုင်း ဈေး) ဖုန်း-၀၉-၇၃၀၇၆၆၇၈-------------------------------------------------------အသုံးမပြုရသေးသော အသစ်စက်စက် ပရိဘောဂ ပစ္စည်းများ ကုထားထိုင်၊ စားပွဲ၊ မှန်တင်ခုံ၊ တီဗွီ စ တန်း၊ ဘုရားစင် အားလုံးတို့ကို ဆိုင်ဖြုတ် ဈေးဖြင့်ရောင်း မည်။ ဖုန်း-၀၉-၄၀၁၅၃၆၁၈၀၊ ၀၉-၅၁၉၃၀၆၄-------------------------------------------------------အိမ်ခန်း /ကား ငှားရန်ရှိသည်။ လှိုင်သာယာ မြို့နယ် တွင်းရှိ ၊ ဈေးနှင့်နီးသွား လာရလွယ်ကူသည်။ DYNA (86) Model ဟိုက်စကီး (၁၀) ပေ ကုန်တင်ရန် အသင့်ကားကောင်း၊ လုပ်ငန်းသုံး အသင့်ဖြစ်ပြီး ဖုန်း-၀၉-၇၃၀၅၈၆၀၄၊ ၀၉-၅၀၂၀၁၇၈-------------------------------------------------------P.S1,2 T.V Game Set HONDA Elemax 1900 မီးစက် ၁ လုံး ဖုန်း-၀၁-၂၉၅၆၄၀-------------------------------------------------------တိုက်ခန်းရောင်းမည်။ 25× 50 အခန်း (၂) ခန်း တတိ ယထပ်၊ ကြည်မြင်တိုင်မြို့နယ်၊ သီတာ ရုပ်ရှင်ရုံ အနီး၊ သိန်း ၄၀၀၊ ပွဲစားမလို ၊ ဖုန်း-၀၉-၇၃၁၇၃၅၀၉-------------------------------------------------------House for Sales9miles, Mayangone Township, Bonyarna Lane (50”x 70”) garden with including house (3500 Lakhs) no agent please Please call (09-5036519 and 09-421029911)-------------------------------------------------------Sony Xperia Neo, CPU 1 GHz, 8 MP Camera, Memory 8 GP, LED Back Light, (၆) လသုံးပြီး အသစ် နီး ပါးကောင်း၊ ပစ္စ္စည်းစုံပါသည်။ ၁၅၀,၀၀၀ ကျပ် Ph: 095098734-------------------------------------------------------Brand new iPad3(the new iPad) 16GB White wifi only ပါကင်မဖွင့်ရသေးသော အသစ်စက်စက်ကို အလွန်တန်သော ဈေးဖြင့်ရောင်းပါမည်။ Core i5 (2nd Gen) နှင့် Graphics 1GB, 4GB RAM, 750GB HDD, USB 3.0 ပါရှိသော Brand new Acer laptop အသစ်ကို အလွန်တန်သော ဈေးဖြင့်ရောင်း ပါမည်။ 1GB graphics ပါရှိသော၊ အသစ် နီးပါး ကောင်းမွန်သော Asus laptop တစ်လုံး (အသုံးပြုပြီး) ကိုလည်း ရောင်းရန်ရှိသည်။ ဖုန်း- 09 519 6687-------------------------------------------------------ရန်ကုန်တိုင်း၊လှည်းကူးမြို့နယ်၊ငါးဆူတောင်ကျေး ရွာ၊ (၂) ရပ်ကွက်ရှိမြေကွက်( ပေ ၈၀ ပေ100 )မြေ ပါမစ်ရှိ ညှိနှိုင်းဈေးဖြင့်ရောင်းမည်။ Ph -095121477-------------------------------------------------------Samsung galaxy s2(used)250000/-S3(used)350000/-PH 09-448007979.-------------------------------------------------------iPod Touch (2nd Generation) 8Gigabytes Jailbreak and Apps Installed. 70,000 ks / Galaxy Note2 (Titanium Grey) (GT-N7100) (Made in Korea) 4.1.2 Version MS MOBILE STORE 71/Yay-Kyaw Road PH: 09450006838/ 298474-------------------------------------------------------Samsung galaxy s (used)135000/-ph 0973077790 www.myanmarusephone.com-------------------------------------------------------Mac Mini Server (Mac Mini Server ရောင်းမည်။) Near Brand New (အသစ်နီးပါးကောင်းမွန်) Processor2GHz Intel Core i7, Memory 8 GB DDR3, Graphics Intel HD Graphics 512 MB, Hard Disk 1TB, Serial Number C07G35DWDJY7, Software Mac OS X Server Lion 10.7.4 (11E53) Mac OS X Lion Server + Parallel Window 7........ Price - 5XX,XXX . . . . . . ဈေးနှုန်းညှိနှိုင်းလိုပါက ဖုန်း-095026522-------------------------------------------------------တိုက်ခန်းရောင်းမည်။ 25'x50'၊၃လွှာ၊ ပါရမီလမ်း မပေါ်(ဗဟိုလမ်းအနီး)၊ ၁၆ ရပ်ကွက်၊ လှိုင်မြို့နယ်၊ အိမ်ဖုန်းလိုင်းပါ၊ အဲကွန်း ၃ လုံး၊ အတွင်းပိုင်း ပြင်ဆင်ပြီး။ *ကျပ်သိန်းကိုးရာ*(အလျော့အတင်း) ဖုန်း 01 522343 ၊ 09 73238068-------------------------------------------------------MSi Laptop ရောင်းရန်ရှိသည်။ CPU - Core i3 HDD- 500GB Memory - DDR32GB Bluetooth, Wifi, Battrey6cell တိုက်ခန်းရောင်းရန်ရှိသည်။ ၄လွှာ၊ သမိုင်း (၃) လမ်း၊ ပါကေးခင်းပြီး ဖုန်း 0973177407 ကိုသီဟဇော်-------------------------------------------------------Classic Standard Condominium, နှစ်ခန်းတွဲ (28 A, 28B) ,၂၇လမ်းXကုန်သည်လမ်း၊ ၂လွှာ၊ 1756 ပေ၊အမြင့် 14 ပေ သိန်း( ၃၅၀၀) Hall Type ဆရာ ဝင်းဇော်( အင်ဂျင်နီယာ) 0942 0070692/ 0921 50075-------------------------------------------------------Galaxy Note2 (Titanium Grey) (GT-N7100) (Made in Korea) 4.1.2 Version MS MOBILE STORE 71/Yay-Kyaw Road 09450006838/ 298474-------------------------------------------------------SAMSUNG galaxy tab27.0" တစ်လုံးရောင်းမည်။ excellent condition.price 150000ks.phone 09450000744-------------------------------------------------------iphone 4s (32g)white USA official unlock good condition.include boxes. k=390000/- 09 7311 5399 /01389043-------------------------------------------------------( 26' x 55' ) တိုက်ခန်း အမြန်ရောင်းမည်။ 09-73143638 /09-49101528-------------------------------------------------------ဥယျာဉ်ခြံရောင်းမည်။ ပဲခူးမြို့ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လေယာဉ်ကွင်းနှင့် မဇင်းဆည်မြောက်ဘက် ကတ္တရာ လမ်းဘေး ထောင့်ကွက်၊ ရာဘာနှင့် သီးပင်စားပင် အစုံလျှိုပိတ် ရေကန်ပါသည်။ ၂၁ ဧက၊ တစ်ဧက သိန်း ၁၅၀၊ ပွဲစားမလို။ ဖုန်း-၀၉-၄၂၁၁၄၃၄၃၇-------------------------------------------------------P4 2.4 GHz, Memory 256, Philips 14' CRT တစ်စုံစာ ရောင်းမည်။ ဈေး -70000 ဖုန်း-၀၉-၇၃၁၅၂၄၄၉-------------------------------------------------------iPhone 3Gs (16 GB) white price 200,000 ပစ္စည်းစုံ ဖုန်း-၀၉-၇၃၁၅၂၄၄၉-------------------------------------------------------Fore sale: iPhone 4s64gb (black) iphone 4s32gb (white) iPhone 4s16(white) iPhone 4s16(black) iPhone 4g32gb(black) iPhone 4g32gb(white)ipad2 64 wifiplus 3G (black)New Ipad16G 4G+wifi(white) ipod shuffle2GB ph: 09401551411။-------------------------------------------------------ပဲခူးတိုင်း အနောက်ပိုင်း ဇီးကုန်းမြို့ ရန်ကုန်ပြည် လမ်းအနီး တစ်နာရီ စပါးတင်း (300 )ကျ စပါးခွံ ဓါတ်ငွေ့ အင်ဂျင် (အသစ်) သုံးလုံးတီး ဆန်စက် ရောင်းရန်ရှိသည်။ လိုင်စင်အပြည့်အစုံပါသည်။ မြေအကျယ် - 400x400ပေ စက်ရုံအကျယ်- 80x120 ပေ ရောင်းဈေး သိန်း (2500) 05334059 ., 0943183532, 09423671796။-------------------------------------------------------ရောင်းရန်ရှိသည်။ WiMax (Bagan), McWill, Ph: 09-448006520။-------------------------------------------------------အသုံးမလိုသော WiMax,McWill များဝယ်လိုသည်။ Ph: 245415။-------------------------------------------------------For Sale Samsung Galaxy Gio (nearly2month used) With Full Accessories Price-60000Ks, ဖုန်း - 09 45000 6088။-------------------------------------------------------iPhone-5 16GB-630,000/- 32GB-728,000/- Singapore Official Unlock Available in White and Black Color 298474 MS MOBILE STORE(71/Yay-Kyaw)။-------------------------------------------------------To sell HTC OneX, 32Gb. price 280000.i phone 4s နှင့် အလိုက်ပေးလဲလိုသည်။ ph;09 73158048။-------------------------------------------------------Samsung galaxy note 10.1" nearly new model n8000 price 370000/- ph 09-421122777။-------------------------------------------------------
။ -------------------------------------------------------Myanmar Red Cross Society, Deputy Head of Division (1) Post, Ph:/ Fax: 067 419016, 419017 (Ext: 228), 098553282။-------------------------------------------------------MSI Laptop များဖြန့်ချိလျှက်ရှိသော Royal Smart Co.,Ltd မှ အောက်ဖော်ပြပါ ၀န်ထမ်းများအလိုရှိသည်။ အရောင်းဝန်ထမ်း (၁၀) ဦး (ကျား/မ)၊ အထွေထွေ အလုပ်သမား (၂) ဦး (ကျား)။ ဖုန်း - 01-2401102၊ 09-73020981။-------------------------------------------------------CMS (Computer Maintenance & Services) Urgently Require Hardware and Network Technician Male (1) Post Ph:095130617။-------------------------------------------------------1. Documentation & Monitoring Officer, 2. Program Officer. No (1), Win Ga Bar Avenue, Shwe Gone Daing, Bahan Township, Yangon-------------------------------------------------------Computer နှင့်ပတ်သတ်သော အလုပ် လုပ်ချင် သည်။ Microsoft Office 2007, Adobe Pagemaker 7.0, Photoshop Cs3, Internet & Email.ခန့်မှန်းလစာ (၈၀,၀၀၀) ကျပ်လျှင်လုပ်မည်။ Ph- 09421732857, 09402533141-------------------------------------------------------Joomla CMS (ကျွမ်းကျင်) (2) Posts, Web Designer (ကျွမ်းကျင်) (2) Posts (လုပ်ငန်းအတွေ့ အကြုံရှိသူများသာ) အမှတ် (၆၉) ၊ စိတ္တသုခလမ်း ၊ ကျောက်မြောင်း။ ဖုန်း -09-73241812-------------------------------------------------------
No.10, kwinchaung2st, Ahlone, 1st floor-------------------------------------------------------ရွှေစကား မန္တလေးကွန်ပျူတာ အိမ်လိုက်သင်သည်။ (မန္တလေးမြို့တွင်သာ) ကွန်ပျူတာ အခြေခံမှစပြီး လေ့ လာလိုသူများ၊ ကလေးငယ်များနှင့်၊ ရုံးသုံး၊ လုပ်ငန်း သုံး ကွန်ပျူတာ အသုံးပြုနည်းများကို တစ်ဦးချင်း စနစ် ကျစွာ သင်ပေးပါသည်။ ရုံးသမားများ အတွက်လည်း ရုံးချိန်လွတ်တန်းခွဲသစ်များ ရှိပါသည်။ ကိုယ်ပိုင် ကွန် ပျူတာ မရှိသေးသူများကိုလည်း သင်တန်းမှ လက် တော့ဖြင့် သင်ကြားပေးပါသည်။ Computer for kids, Basic Accounting for job, i Office, Advanced Excel (Accounting) Course, DTP Course, MYOE Software, Peach Tree Software, Window Shortcut Course, Internet & Email Course, MP3, MP4, Video Editing, Multimedia Course Ph:09-444011279-------------------------------------------------------Englsih Speaking သီးသန့် အိမ်လိုက်သင်သည်။၁၀ တန်း အောင်မြင်ပြီး နိုင်ငံခြားသွားမည့်သူများအားနိုင်ငံခြားတွင် ကြာမြင့်စွာ နေခဲ့ပြီး နိုင်ငံခြားသွား သင် တန်း သားများစွာ လေ့ကျင့်ပေးခဲ့သူ Chief Engineer ကိုယ် တိုင်သင်သည်။ Grammar/4 skills သင်ပေးသည်။ ဖုန်း-၀၉-၇၃၀၃၈၈၁၀-------------------------------------------------------Grade10.11ကျောင်းသား/သူများအတွက်စာကျက်ရခက်ခဲမရှိအောင်သင်ကြားပေးပါသည်။ စာကျက်နို င် အောင်ကူညီ စာကျက်ပေးပါသည်။မိုးမမမျိုး(B.Sc (biochemistry) 0943185367-------------------------------------------------------၈၊ ၉၊ ၁၀ တန်းအင်္ဂလိပ်စာ ၂ လပြတ် Grammar & Text အိမ်လိုက်သင်သည်။ ဦးဥာဏ်ထွန်း B.A (English) ဖုန်း-၀၉-၄၅၀၀၄၀၃၂၈-------------------------------------------------------GTC Teaching & Guide 1st, 2nd repeater and external ကျောင်းသားများအတွက် GTC ဆရာ ဟောင်း များ အဖွဲ့မှ (၃) လပြတ် အထူးဘာသာ စုံ (သို့) တစ်ဘာသာချင်း အိမ်လိုက်သင်သည်။ ဖုန်း-၀၉-၄၅၀၀၄၀၃၂၈-------------------------------------------------------၁၀တန်း(Guide+ကျူရှင်) (မြန်မာ/Eng/Bio ကျက်စာ (၃)ဘာသာစလုံးအား အထူး သီးသန့်ခွဲ၍ အောင် မှတ်၊ ဂုဏ်ထူးမှတ်များ ရအောင် သင်ကြားကျက် မှတ် ပေးသည်။ (တစ်ချိန်လျှင် (၂/၃)ဦး) Ph:01-667818, 0973083016, 09421111971-------------------------------------------------------သချာင်္သီးသန့် (မူလတန်း၊ အလယ်တန်း) ဖုန်း-၀၉-၄၂၅၃၀၇၄၈၃ (မိုးမိဂျိ စာသင်ဝိုင်း) -------------------------------------------------------၁၀ တန်း ဓါတုဗေဒသင်လုပ်သက်များ သော ဓါတုဗေဒ ကျွမ်းကျင်ဆရာမမှ ထူးချွန်အောင် မြင်ရန် သင်ကြား ပေးလိုပါသည်။ ဓါတုသင်လိုအပ် နေသော စာသင်ဝိုင်း များတွင်သင်ကြားလိုပါသည်။ ဖုန်း-၀၉-၇၃၀၇၀၃၇၃ -------------------------------------------------------Four skills for your English ဆရာဝေယံ (B.C.Sc Hons Q) ၊ ဆရာမနီနီ (B.A IR) စာသင်ခန်းအခြေပြုနှင့် အိမ်အရောက် သင်ကြားပေးနေပါပြီ။ ဖုန်း-၀၉-၇၃၁၆၁၅၁၀၊ ၀၉-၄၂၀၁၁၉၄၂၀-------------------------------------------------------အိမ်တိုင်ရာရောက် သင်ကြားပေးသည်။ ကွန်ပျူတာ ကို အခြေခံမှစ၍ လေ့လာလိုသူ ရုံးဝန်ထမ်းများ၊ ကလေးများ၊ စာစီစာရိုက် လေ့လာလိုသူများ၊ ဖိတ်စာ၊ ဓါတ်ပုံနှင့် ဗွီနိူင်းဒီဇိုင်း ဆွဲလိုသူများ၊ အင်တာနက်ကို လေ့လာလိုသူများ၊ လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ ကုန်ပစ္စည်း စာရင်း အချက်အလက်သွင်းပြီး လက်ကျန် အရှုံး အမြတ် တွက်ချက်လိုသူများကို ကွန်ပျူတာ ဒီပလို မာကျောင်းမှ ဆရာမများကိုယ်တိုင် အိမ်တိုင်ရာ ရောက် သင်ကြားပေးသည်။ကွန်ပျူတာ မရှိသော သူ များကိုသင်ကြားပေးပါသည်။ဖုန်း- 09-448003402-------------------------------------------------------Asia ကိုရီးယားဘာသာစကား အခြေခံသဒ္ဒါနှင့် စကား ပြောသင်တန်း၊ TOPIK သံရုံစာမေးပွဲ သင်တန်း၊ EPS-KLT မေးခွန်း (၂၀၀၀) သင်တန်း တိုက် (၃)၊ အခန်း ၄၀၁၊ စက်ရုံလမ်းKSS နတ်သုဒ္ဓါဒံပေါက်ဆိုင် အပေါ်၊ ၅ လွှာ၊ မင်္ဂလာဈေး၊ ကားမှတ်တိုင်အနီး။ ဖုန်း-၀၉-၅၁၆၄၄၆၇-------------------------------------------------------သူငယ်တန်းမှ ၁၀ တန်း၊ International Schools, ဘာ သာစုံ (သို့) တစ်ဘာသာချင်း အိမ်အရောက် သီးသန့် သင်ကြားပေး နေပါသည်။ တရုတ်၊ အင်္ဂလိပ်- 4skills New Future ၀၉-၇၃၀၇၇၈၃၀၁-------------------------------------------------------အမေရိကမှ အင်္ဂလိပ်စာ ဘွဲ့ရ ဘာသာပြန် စာရေး ဆ ရာသင်ကြားသော သဒ္ဒါနှင့် ရေးဖတ် ဘာသာပြန် စာသင်ဝိုင်း ဖုန်း-၀၉၇၃၁၅၈၉၉၁-------------------------------------------------------Study Guide for IDCS, IADCS and BIT Courses and Assignment PH:0973005135-------------------------------------------------------Glaxy Mobile Repair & Training မှ Handset ပြုပြင်သင်တန်း ၁။ Hardware ပိုင်းဆိုင်ရာ အပြစ်ရှာပြုပြင်နည်း၊ ၂။ Software ပိုင်းဆိုင်ရာ Firmware ရေးနည်း၊ Root လုပ်နည်း၊ Hack လုပ်ငန်းနှင့် Jail break လုပ်နည်းများကို စာတွေ့လက်တွေ့ သင်ပြပေး နေပါသည်။ အမှတ် ၂၀၇၊ လမ်း ၄၀၊ အလယ် ဘ လောက်၊ ကျောက်တံတားမြို့နယ်။ ဖုန်း-၀၉-၇၃၀၉၈၆၃၀၊ ၀၉-၄၂၁၁၀၁၁၃၆-------------------------------------------------------ဒေါ်သိင်္ဂီထွန်း (yamaha music) ကိုယ်တိုင် Piano / Organ အိမ်လိုက်သင်ပေးသည်။ သားသား/မီးမီး တို့ ဥာဏ်ရည် သွက်လက်ပြီး ထက်မြတ်စေဖို့၊ ငယ်စဉ်က တဲကဂီတကိုသင် ယူကြပါသည်။ International Notes ဖြင့်စနစ်တကျ အတတ်သင်ပေးပါသည်။ Ph : 09 73110 339-------------------------------------------------------ဟိန်းထက်စံ တံဆိပ်ရိုက်လုပ်ငန်းမှ ပလပ်စတစ် အိတ်၊ အကျီနှင့် အိတ်များပေါ်တွင် တံဆိပ်ရိုက်နှိပ် ခြင်း၊ လက်မှုပညာသင်တန်းများကို လက်တွေ့ တစ်ဦး ချင်းစီ တတ်မြောက် ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်း ပြုလုပ်နိုင် သည် အထိ သင်ကြားပေးသည်။ ဖုန်း-၀၉-၄၂၅၃၀၅၃၆၃ -------------------------------------------------------ပြောင်းလဲလာသော ဈေးကွက်စီးပွားရေး စနစ်နှင့် အတူ မြန်မာနိုင်ငံသို့ လာရောက်ရင်းနှီးမြုပ်နှံမည့် ဂျပန်စီးပွားရေး လုပ်ငန်းများတွင် ၀င်ရောက် လုပ်ကိုင် နိုင်ရန် သင့်ရဲ့ ဂျပန်စာ အရည်အသွေး တိုးတက် စေ ရန် အတွက် Kizuna Japanese Culture Center/Library & Language မှ အခြေခံအဆင့် ဂျပန် ဘာသာသင်တန်းများ၊ အဆင့်မြင့် ဂျပန်ဘာသာ သင် တန်းများကို လစဉ်တန်းခွဲများဖွင့်လှစ်နေပါပြီ။ ဖုန်း-၀၉-၄၃၁၂၀၀၂၅ -------------------------------------------------------ACH Computer Training Center မှ နိုင်ငံတကာ အဆင့်မီ Networking ပညာရပ်မျာဖြစ်သည့် (1) A + ( Hardware Course) (2) N + ( Network Engineering Course) (3) Advanced Networking(4) CCNA (5) CCNP (6) Fedora Linux Server (7) Zentyal Linux Server (8) Linux Proxy Server (9) CCNA Security အစရှိသည့် သင်တန်းများကို လစဉ် ဖွင့်လှစ်ပေးလျက်ရှိပါသည်။ စိတ်ပါ ၀င်စား ကြသူများအနေနှင့်ACH Computer Training Center တိုက် (၃)၊ အခန်း (၄၀၁)၊ (၅) လွှာ၊ KSS ဒံပေါက်ဆိုင်အပေါ်၊ မင်္ဂလာဈေးအနီး။ ဖုန်း- ၀၉-၄၃၀၆၇၆၉၂ သို့ ဆက်သွယ်စုံစမ်းနိုင်ပါသည်။-------------------------------------------------------IELTS/TOEFL Preparation Course, English 4-skills+ Business Letter writing course များကို နိုင်ငံခြားမှ English Master ဘွဲ့ရ ဆရာ ကိုယ်တိုင် နည်းစနစ်မှန်ကန်စွာနဲ့ အိမ်လိုက် သင်ကြား ပေးသည်။ ဆက်သွယ်ရန်- 09421009091 -------------------------------------------------------၈ တန်း သီးသန့် ဘာသာစုံ စာသင်စာကျက်ဝိုင်း ၂၀၁၃/ ၁၄ ပညာသင်နှစ်အတွက် အပ်နှံနိုင်ပါပြီ။ ပုဇွန် တောင် မြို့နယ်၊ လစာ ၄၀၀၀၀၊ ဖုန်း-၀၉-၇၃၀၇၇၃၀၁-------------------------------------------------------Study Guide (ရန်ကင်းမြို့နယ် အတွင်းသာ) သူငယ် တန်း မှ (၇) တန်းအထိ ဘာသာစုံ၊ (၈) တန်းကျက် စာသီးသန့် အိမ်အရောက် သင်ကြားပေးပါသည်။ Ph: 09 730 25931 / 09 43113316-------------------------------------------------------Saya KyawNaingLatt @ Dennis Special - English Four skills(Intro-Advanced) -IELTS (Foundation & Preparation) -communicative skill in English - English for Grade 11 Ph: 09-401604365-------------------------------------------------------PROMISE အင်္ဂလိပ်စာ သင်ကြားရေးနှင့် ဘာသာပြန် ဝန်ဆောင်မှု စာပေါင်းစုံ ဘာသာပြန်ဆိုခြင်း၊ ကိုယ်ပိုင် ကျောင်းများအတွက် တန်းစုံအင်္ဂလိပ်စာ ၊ အင်္ဂလိပ်စာ အခြေခံအား နည်းသူများ၊ ကုမ္ပဏီနှင့် ဌာနဆိုင်ရာ ဝန်ထမ်းများအတွက် လုပ်ငန်းခွင်သုံး/ရာထူးဝင် အင်္ဂ လိပ်စာ ရက်တိုအမြန်/ရက်ရှည်၊ PROMISE အင်တာ ဗျူးဝင် အင်္ဂလိပ်စာ ( အမြန်ရက်တို)၊ နိုင်ငံခြားသွား အင်္ဂလိပ်စာ (ရက်တို/ရက်ရှည်)၊ Four Skills (လပြတ်၊ လစဉ်တန်းများ) ဖုန်း-၀၉-၄၀၁၅၄၀၄၅၂-------------------------------------------------------အိမ်အရောက် ကွန်ပျူတာ သင်ကြားပေးခြင်း (Computer Basic Course) ကွန်ပျူတာကို အခြေခံကို ပိုင်နိုင်စွာ အသုံးပြုတတ်စေရန်နှင့် လုပ်ငန်းခွင်တွင် အခက်အခဲမရှိ အသုံးပြု တတ်စေရန် သင်ကြား ပေး သည်။ ကျွမ်းကျင်တတ်မြောက် စေရန် အတွက် Exam များကိုလည်း မကြာခဏ ဖြေဆိုပေးခြင်းဖြင့် တတ်မြောက်အောင် သင်သည်။ GTC ကျောင်းသား ကျောင်းသူများအတွက် Power Point ပြုလုပ်နိုင်သည် အထိ လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးသည်။မိမိကလေး ငယ်များ ကိုလည်း ကွန်ပျူတာ အခြေခံတတ်မြောက် စေရန်အတွက် Computer For Kids Course (English School မှ ကလေးငယ်များကိုလည်း ကွန်ပျူတာ ကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်စွာ အသုံးပြုတတ်စေရန် စနစ်တကျ လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးပါသည်။) Internet & Email Course ကိုနားလည် သဘောပေါက်စေရန် စနစ်တကျ သင်ကြားပေးပြီး အကောင့်သစ်တည်ဆောက်ခြင်း၊ Websites များမှ Download ဆွဲခြင်း၊ Gmail အသုံး ပြုပုံများကို အလွယ်တကူ သိရှိနားလည် သဘော ပေါက်စေရန် သင်ကြားပေးပါသည်။ ဖုန်း-၅၁၂၈၄၄၊ ၀၉-၄၅၀၀၁၂၃၉၅-------------------------------------------------------Practical A+ with Fundmental Network သင်တန်း ဝင်းဒိုးတင်ခြင်း၊ Installation လုပ်ခြင်း၊ Game သွင်းခြင်း၊ Driver တင်ခြင်း၊ Virus သတ်ခြင်း၊ Password ဖြင့် ဖိုင်များကို ကာကွယ်ခြင်း၊ ကွန်ပျူတာ တစ်စုံ လုံး ကို ကိုယ်တိုင်တပ်ဆင်နိုင်ပြီး ကိုယ်တိုင်ပြုပြင်နိုင်မည့် အပြင် နက်ဝပ်ချိတ်ဆက်ခြင်းနှင့်ဖုန်း ဖြင့် အင်တာနက်ချိတ်ဆက်ခြင်း သင်တန်း၊လက်တွေ့ တပ်ဆင် ပြုပြင်ရမည်။ ကျား/မ မရွေး တက်နိုင်သည်။ (အိမ်လိုက်မသင်ပါ)။ အမြန်သင်တန်းလည်း ရှိသည်။ဖုန်း-၄၅၀၀ ကျပ် TLCC Computer Centre သိမ်ဖြူ ကားမောင်းကွင်းရှေ့ ဖုန်း-၀၉-၅၁၉၆၀၆၇-------------------------------------------------------Pre IGCSE, IGCSE (Edexel & London) ဖြေဆိုမည့်ကျောင်းသားကျောင်းသူများ အတွက် နှင့် Int'l Sch:(Sec Levels) ကျောင်းသူ ကျောင်းသား များ အတွက် အင်္ဂလိပ်စာ ဘာသာရပ်ကို အိမ်တိုင်ရာ ရောက် သင်ကြား ပေးပါသည်။ ဆရာဥာဏ် (အင်္ဂလိပ် စာ) ဖုန်း- ၀၉ ၄၂၂ ၄၆၈ ၃၁၈-------------------------------------------------------ကွန်ပျူတာကိုအခြေခံမှစ၍စနစ်တကျလေ့လာလိုပါလျှင်၊ ကလေးငယ်များအတွက်ကွန်ပျူတာကိုအခြေခံမှစ၍စနစ်တကျသင်ကြားပေးဖို့ လိုအပ် နေပါလျှင် Ph: 09 730 38384-------------------------------------------------------IELTS Foundation နှင့် Preparation သင်တန်းများ ကို အတွေ့အကြုံရှိ ဆရာကိုယ်တိုင် လစဉ်ကြေးတစ်လလျှင် (၂၀၀၀၀) ကျပ်ဖြင့် စတင်သင်ကြား ပေး သည်။ S.Y.K English Class Ph.09421009091-------------------------------------------------------Ever Stand ကိုရီးယားစာသင်ဝိုင်းမှ EPS-TPOIK စာမေးပွဲအတွက် သီးသန့် (၇) ယောက်ဝိုင်းများ လှည်း တန်း-ဗဟန်း ဖုန်း-၀၉-၄၃၁၀၇၄၀၂-------------------------------------------------------အလယ်တန်း၊ အထက်တန်း ကျောင်းသား၊ကျောင်း သူများအတွက် ထူးချွန်စွာ တတ်မြောက် စေရန် Home Special Guide သင်ကြားပေးနေသည်။ ဆရာမ မီးမီး-09-421110494-------------------------------------------------------ကွန်ပျုတာ သင်လိုသူများ ဖုန်းဆက်လိုက်ရုံနဲ့ သင် ကြားပေးနိုင်ပါသည်။ ကွန်ပျူတာ အခက်အခဲရှိ သူများ ကိုလည်း Laptop နှင့် စီစဉ်သင်ကြားပေးပါသည်။ Basic course, DTP Course , Email & Internet, Advance Excel, Computer for Kids, MYOB II , III, Graphic Design Ph,09402537568 ဆရာ နှင့် ဆရာမကို ရွေးချယ်သင်ယူနိုင်သည်။-------------------------------------------------------Computer သင်တန်းများကို ဈေးနှုန်းချိုသာစွာဖြင့် အိမ်လိုက်သင်ပေးသည်။ Basic (ioffice 2007)+ window7- 35000Ks. Photoshop Design - 35000Ks. DTP (Adobe Pagemaker) + Nero9- 35000Ks. A+ (Hardware) ကွန်ပျူတာ Desktop သာမက Laptop ပါပြင်နိုင်ရမည်။ 40000Ks Internet & Email+ Blogger+ Facebook (20000 Ks) ဘယ်သင်တန်းနှစ်မျိုးကိုမဆို တစ်ပြိုင်တည်း အပ်ပါ က နှစ်မျိုးပေါင်း 60,000Ks ဖြင့်သင်ပေးပါသည်။ Ph-09421732857-------------------------------------------------------At least5or 10 persons inasection for Chinese & English Language (Basic, Intermediate, Advanced) and English Conversation Course At least 1 or2persons inaclass forBasic Computer and Graphic Design Course in Future Point : Block 38/1, Baw Zin Street, Baw Zin Lan Thwe (3), Thuwunna Tsp, Yangon. Mobile : 09 73215521-------------------------------------------------------စင်ကာပူတွင်စာသင်ကြားပေးခဲ့သောသင်ကြား လမ်းညွှန်မှု(12 နှစ် ရှိ) Special Study Guide ဝါရင့်၊ ကျွမ်းကျင်၊နည်းစနစ်ကျသော။။International School အစိုးရကျောင်းမှ Grade10,11&Int'l School(Primay &SecondaryLevels) အတန်းစုံ(SAT, TOE FL,IELTS) BryanM.E(IT)(Leader) 09420070692 ဆရာထက်B.E(IT) 0921 50075။-------------------------------------------------------LIGHT COMPUTER CENTRE တစ်ဦးချင်း သီးသန့်(၂ပတ် အမြန်သင်တန်း) Photoshop 30000/-,Auto CAD 30000/- Computer Basic 15000/- PH-09421002451(Thingangyun)-------------------------------------------------------Active English (Interactive English Classes) English ဘာသာ စကားကို ရင်းနှီးတက်ကြွစွာ အပြန် အလှန် ဆွေးနွေးအကြံပေးသည့် ပုံစံဖြင့် သင်ကြား ပေးနေပါပြီ အခြေခံ မကောင်းခဲ့၍ English ဘာသာ စကားကို ကြောက်နေသူများ ၂ လ အတွင်း မိမိကိုယ် မိမိ ယုံကြည်စွာပြောဆိုရေးသား နိုင်ရန် သင်ကြားပေးနေပါပြီ ... “မိမိနှင့်ကိုက်ညီသည့် သင်ကြားပုံ ဟုတ်မဟုတ် သေချာ လာရောက် ဆွေးနွေး နိုင်သည် ။ လက်ရှိတန်းခွဲများတွင် ကြိုတင်တက်ေ ရာက်လေ့လာနိုင်သည် ။” 09 4311 5202-------------------------------------------------------LINN SINGAPORE ACCOUNTANCY JOBS TRAINING CENTER., Singapore Documents များနှင့် Singapore တွင်လက်တွေ့ အလုပ်လုပ်သော ၊ လုပ်သက်အတွေ့ အကြုံရှိသော ဆရာကိုယ်တိုင် သင်ကြားပေးနေသော, MYOB, UBS, Peach Tree, Quick Book, ACCPAC, SAP Accounting Software များနှင့် Singapore တွင်အလုပ်လုပ်နေသော Accountant တယောက်လုပ်ကိုင်ပုံများကို သင်ကြားပေး နေသော သင်တန်း တခုလျင် လူ ၁၅ ဦးသာ လက်ခံပြီး အနီးကပ်လေ့ကျင့် သင်ကြားပေးနေသောနေရာ Singapore Accountant အတွက်သာ သီးခြားသင်ကြား သည့် တခုတည်းသောနေရာ။ Phone- (95) 9-49337810-------------------------------------------------------ကွန်ပျူတာကို အခြေခံမှစ၍ အိမ်လိုက်သင်သည်။ Basic, DTP, Advance Excel, Graphic, Internet & Email, Microsoft Access, Video Editing, Web Application, PHP,MYOB, Peachtree Accounting. လူကြီးမင်းတို့၏ လုပ်ငန်းများအတွက် website များကို ချုိုသာသော ဈေးနှုန်းဖြင့် အကောင်း ဆုံး ရေးဆွဲဆောင်ရွက်ပေးနေပါတယ်။မချစ်သန္တာ Ph : 09420084679-------------------------------------------------------AutoCAD အိမ်အရောက်အတတ်သင် ပြည်တွင်း ပြည်ပတွင်အလုပ်လုပ်မည့် သူများနှင့် ကျောင်း တက် မည့်သူများအတွက် AutoCAD (Mech, Civil, Architect, Electrical,Revit) , Sketchup, 3dsMax,M&E drafting Microstation, Photoshop Course အားလုံး ကို B.E ဘွဲ့ရဆရာကိုယ်တိုင် အိမ် Company အရောက်အတတ်သင်ကြားပေးသည်။ လုပ်ငန်းခွင် တွင် တိုက်ရိုက်အသုံးချနိုင်ကြောင်း အာမခံသည်။ Ph : 0973195032-------------------------------------------------------အခြေခံတရုတ်စာသင်တန်း။ အခြေခံ တရုတ်စာသင်တန်း(ရေး၊ဖတ်၊ပြော)သင်သည်။ ကလေးများ နှင့် အမျိုးသမီးသီးသန့်သင်သည်။ အိမ်လိုက် သင် သည်။ Ph 09-421-156070။-------------------------------------------------------
Facebook - www.facebook.com/jurassic.thz-------------------------------------------------------ကွန်ပြူတာ အိမ်လိုက်ပြုပြင်သည်။ window တင်ခြင်း၊လိုအပ်သော software များ ၊ driver များ ရှာဖွေပေး သည်။ Gmail account သစ်ဖွင့်ပေးသည်။ Internet & email နှင့်တခြား အင်တာနက် ဆိုင်ရာ ပြဿ နာများ ဖြေရှင်းပေးသည်။Internet &email သင် သည်။ Phone- 095077607 ပုဇွန်တောင်မြို့နယ်။-------------------------------------------------------Silver Crown Technical Service မှ အဲယားကွန်း ၊ ရေခဲသေတ္တာ ၊ အ၀တ်လျှော်စက် ပြုပြင်တပ်ဆင်ခြင်း နှင့် ဆေးကြောခြင်းလုပ်ငန်းများကို လူကြီးမင်းတို့ အိမ် အရောက် ဝန်ဆောင်မှုပေးနေပါသည်။Ph - 09-73143638 /- 09-49101528-------------------------------------------------------MNS Services-Network Installation,Managing & Troubleshooting,Network, Infrastructure (Routers, Switches, Wifi-Lan, Hubs,etc.), Installation,Hardware Services,IP Camera, Security Solution(Finger Print,FireWall,etc.) တို့အား Contract ဖြင့်ဆောင်ရွက်ပေးနေပါသည်။ Ph:09420124959,09401558562-------------------------------------------------------iPhone Network Lock ဖြည်ခြင်း၊ လိုအပ်သော Software, Hardware ပိုင်းများအတွက် လည်းကောင်း၊ Blackberry internet setting ပြုလုပ်ပေးခြင်းတို့ အတွက် ချိုသာသောဈေးနှုန်းဖြင့် အဆင်ပြေစွာ ရရှိ နိုင်ဖို့ အတွက် ဖုန်း-၀၉-၇၃၀၁၃၉၃၈-------------------------------------------------------လူကြီးမင်းတို့၏ Desktop, Laptop ကွန်ပျူတာများ အား Windows တင်ခြင်း၊ Virus သတ်ခြင်း၊ Antivirus ထည့်ခြင်း၊ Application နှင့်ဂိမ်း၊ များသွင်းခြင်း၊ ဖုန်းနှင့် အင်တာနက်ချိတ်ဆက်ခြင်းများ၊ Network ချိတ် ဆက်ခြင်းများကို တိကျသေချာစွာ လူကြီးမင်းတို့ စိတ်တိုင်းကျသည်အထိ ဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။ ၀၉-၄၂၁၁၃၅၁၀၇-------------------------------------------------------San Thit Refrigerator, Air Con, Washing Machine & Electrical Wiring, Service Ph: 09-421087913, 01-521391-------------------------------------------------------Mega Tech Web Studio website များ ရေးဆွဲ ပေးခြင်း၊ computer hardware, network ပြုပြင်၊ တပ်ဆင်ခြင်း၊ computer ဘာသာရပ်များကို အိမ်/ရုံး အရောက်သင်ကြားပေးခြင်းကို ဝန်ဆောင်မှု ပေးပါ သည်။ ၈၃၊ ၅ လွှာ၊ လှည်းတန်းလမ်းမ၊ ရန်ကုန်၊ ဖုန်း-၅၂၄၆၁၇ ၊ ၀၉-၇၃၁၂၁၂၆၃-------------------------------------------------------KYAW ZAY Design & Media Publishing မှ လူကြီးမင်းတို့ ၏လုပ်ငန်းအတွက် Annual Magazine (နှစ်ပတ်လည်မဂ္ဂဇင်း), Special Commemorative Book(အမှတ်တရထုတ်စာအုပ်),Company Profile(ကုမ္ပဏီရေးရာအတ္ထုပ္ပတိ),Business Brouchures(လုပ်ငန်းအရောင်းမြှင့်တင်စာစောင်),Business Catalogue(လုပ်ငန်းပစ္စည်းကတ်တလောက်),Diary & Note Book (ဒိုင်ယာရီ နှင့် မှတ်စုစာအုပ်) စသဖြင့် အစရှိသောဝန်ဆောင်မှုများကို ဆောင်ရွက် ပေးနေပါသည်။ 09-5146060,09 73008492, 01384285။-------------------------------------------------------စီးပွားရေးလုပ်ငန်း၊တိုက်၊အိမ်၊ကား၊ခြံ၊Logo- ကုန်အမှတ်တံဆိပ်များနှင့်ပတ်သက်၍ ဆုံးရှုံးနစ်နာ မှုမရှိရအောင် မဆောင်ရွက်မှီ ကြိုတင်ဆွေးနွေး အကြံဥာဏ်ရယူခြင်း၊ ဥပဒေနှင့်အညီ စာချုပ် စာတမ်းများ ချုပ်ဆိုခြင်းနှင့် အထူးသဖြင့်လက်ထပ်မင်္ဂလာဆောင်ခြင်းအား ဂုဏ်ရှိစွာဖြင့် တရားဝင်ဖြစ်ရအောင် စေတနာများစွာဖြင့် အ ထူးကူညီပေးပါမည်။(မင်္ဂလာဆောင်အခန်းအနားတွင် ဘိက်သိပ်ဆရာလိုအပ်ပါကလည်း ကူညီပေးပါသည်။) စေတနာ-ဥပဒေအကြံပေး၊ စာချုပ်စာတမ်းနှင့် ကုန် အမှတ်တံဆိပ်အေဂျင် Ph: 0950 10 830။-------------------------------------------------------လူကြီးမင်းတို့ရဲ့ computer & Network နှင့် ပတ်သက် သောအခက်အခဲများကို အိမ်၊ရုံး၊ဆိုင် အရောက် အကောင်းဆုံးဝန်ဆောင်မှုပေးပါသည်။ Windows installation, software,game, internet - network installation and configuration, virus cleaning, CDMA 800/GSM internet ချိတ်ခြင်း အပတ်စဉ်၊ လစဉ်လပေးဖြင့် services ပြုလုပ်ပေးပါသည်။ No.75 (d) AungThitsar street (2), 13 block, Yankin T/S, Yangon. (PH: 09 420033781)-------------------------------------------------------APS Technology Computer ပြုပြင်ခြင်း၊ Virus သတ်ခြင်း၊ Window, Software & Games များ တင်ခြင်း၊ Cable/Wireless Network ချိတ်ခြင်း၊ CDMA 800/GSM ဖုန်းဖြင့် အင်တာနက်ချိတ် ခြင်း တို့ကို ဖုန်းဆက်ရုံဖြင့် အိမ်/ရုံးအရောက် သင့်တင့် သော ဈေးနှုန်းဖြင့် လူကြီးမင်းတို့စိတ်တိုင်း ကျ ဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။ 40(B), 3rd Flr, Yangon-Insein Road, Hledan. Phone - 095091820-------------------------------------------------------လူကြီးမင်းတို့၏ အင်တာနက်စာမျက်နှာများကိုတစ်နှစ်စာ ၅၉၀၀၀ ကျပ်ဖြင့် အဆင်ပြေချောမွေ့အောင်ဆောင်ရွက်ပေးနေပါပြီ။အသေးစိတ်ကို http://www.lovelyfamilymm.com တွင်ဝင်ရောက်ကြည့်ရှု့လေ့လာနိုင်ပြီဖြစ်ကြောင်းသတင်းကောင်းပါးအပ်ပါသည်။ ဖုန်း ၀၉၇၃၀၃၃၇၆၅-------------------------------------------------------CMS (Computer Maintenance & Services) Mac OS X Lion v 10.7.3 ကို Customized PC (Any Desktop & Laptop) များတွင် စတင် Install ပြုလုပ်ပေးနေ ပါပြီ။iLife, iWork, Final Cut Pro, Aperture, Xcode,Logic Studio, Pro Tool, Toast Titanium, Adobe CS5, Microsoft Office, Media Player, Media Converter, Browsers, System Utilities & Games etc.. ဖုန်း-09 5130617,01 370836~9 Ext:814. Room- 814,8th Floor, La Pyayt Wun Plaza -------------------------------------------------------VPN Account တစ်ခုတည်းဖြင့် နိုင်ငံပေါင်း ၁၁ နိင်ငံ ထဲမှ ကြိုက်နှစ်သက်ရာ နိုင်ငံရှိ server အား လွယ် ကူစွာ ချိတ်ဆက်ပြီး အသုံးပြုနိုင်သည်။ ပြည်တွင်းမှ အသုံးပြု ရန် ခက်ခဲသော Google Play Store ကဲ့သို့သော service များကို အဆင်ပြေလွယ်ကူစွာ အသုံးပြုနိုင်မည် ဖြစ်သည်။ 1 Month - 6000 Kyats3Month - 16000 Kyats Ph: 09-5059179, 09-450062678-------------------------------------------------------အိမ်သုံး၊ရုံးသုံးကွန်ပျူတာများ အင်တာနက်ဆိုင်များ services ပြုလုပ်ခြင်း၊ Network ချိတ်ဆက်ခြင်း တို့ အတွက် ဖုန်းဆက်ရုံဖြင့် အိမ်အရောက် စိတ်တိုင်း ကျ ဝန်ဆောင်မှု ပေးပါသည်။ Ph: 09 73093486, 5031 93 (လှည်းတန်း)-------------------------------------------------------
Kyaw San ( Network & Computer Service ) ကွန်ပျူတာ အိမ်/ရုံးအရောက် တပ်ဆင်ပြုပြင် ပေး သည်။ Network ချိတ်ပေးသည်။ (၃၀၀၀ ကျပ်) ( Network Only ) CDMA 800 , GSMဖုန်းများဖြင့် အင်တာနက် ချိတ်ဆက်ပေးသည်။ နောက်ထပ် အလုံး ရေပွားခြင်းဖြင့် အင်တာနက်သုံးနိုင်သည်။ အင်တာ နက် ချိတ်ခြင်း၊ ဗိုင်းရပ်စ်သတ်ခြင်း၊ ဂိမ်းသွင်းခြင်း၊ Software သွင်းခြင်းများကိုလည်း ပြုလုပ်ပေးမည် ဖြစ်ပါသည်။ အပတ်စဉ် ကုမ္ပဏီ / ရုံး / ဂိမ်းဆိုင်များအား တစ်လတစ်ခါ ငွေပေးချေမှုစနစ်ဖြင့်ပြုလုပ်ပေးမည်။ နယ်များကိုလည်းသက်သာသောဈေးနှုန်း ကောင်း သော ဝန်ဆောင်မှု ထိန်းသိမ်းခြင်းများကိုပါ သင်ကြား ပေးသွားမည်ဖြစ်သည်။ ဈေးနှုန်းများခြင်း မရှိစေရပါ။ Ph: 09430 90565-------------------------------------------------------Ko P2 မိတ္ထူ စက်ပြုပြင်ရေးလုပ်ငန်းနှင့် ကွန်ပျူတာ ပြုပြင်ပေးခြင်း လူကြီးမင်းတို့၏ ရုံး၊ ကုမ္ပဏီ၊ အိမ်များ တွင်အသုံးပြုလျှက်ရှိသော Analog မိတ္တူစက်နှင့် Digital မိတ္တူစက်များ၊ ကွန်ပျူတာများအား ဖုန်းဆက် လိုက်ရုံဖြင့် လူကြီးမင်းတို့ဆီအရောက် လာရောက်ပြုပြင်ပေးမည်ဖြစ်သည် နယ်မြို့များအထိလည်း လာ ရောက်လုပ်ဆောင်ပေးမည် ဖြစ်သည်။ တိကျမှန်ကန် စွာပြုပြင်ပေးသည့်အတွက် စိတ်ချမ်းသာစွာ လုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်နိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း အာမခံစွာ ကြေငြာ ပါ သည်။ PH : 0973196740-------------------------------------------------------လူကြီးမင်း တို့ ရဲ့ Computer (PC) များပျက်လျှင် ၊ Windows တင်လိုလျှင် ၊ Virus သတ်လိုလျှင် ၊ (Small Games) များ ထည့်သွင်းလိုလျှင် ၊ ဖုန်းဆက်လိုက် ရုံဖြင့် အိမ်တိုင်ရာရောက် ဈေးနှုန်းချိုသာစွာ ပြုပြင် တပ်ဆင်ပေးပါသည်။ Windows 8 သီးသန့်တင် ပေးပါသည်။ PC to PC Network (LAN) , Dial-UpInternet ချိတ်ပေးပါသည်။ Phone To Computer (PC) Internet လည်း ချိတ်ပေးပါသည်။ Android Apps and Games လည်း ထည့်သွင်းပေး ပါသည်။ Viber Software နှင့် Viber Accountကို ပြုလုပ်ပေးပါသည်။ Verify G-Mail Account အသစ်ဖွင့်ချင်သူများ Account အသစ်ဖွင့်ပေးပါ သည်။ Account (1) ခု = 3000 ကျပ် (G-Mail Account Only) Ko Min Min Kyaw. ဖုန်း / 09 - 421005277 (လမ်းမတော်မြို့နယ်)-------------------------------------------------------